Gudoomiye Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay dhamaan dadka reer Iowans inay u qalmi karaan talaalka COV | KWIT
Marka loo eego xogta gobolka, in ka badan 30-boqolkiiba Iowans 18 iyo wixii ka weyn ayaa helay ugu yaraan hal qiyaas oo ah tallaalka COVID-19 illaa iyo hadda in ka badan boqolkiiba 95 ee Iowans 65 iyo wixii ka weyn.
Xarumaha daryeelka muddada-dheer waxay ahaayeen kuwa ugu daran ee uu ku dhacay cudurka faafa ee COVID-19. Laakiin saraakiisha gobolka waxay yiraahdaan tallaalka awgood, dillaaca ayaa ku dhowaaday in la baabi'iyo.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa ayaa xaqiijisay 38 kiis oo dheeri ah oo ah noocyada U.K ee kala duwanaanta COVID-19 ee gobolka. Toddobo ka mid ah kiisaska waxaa laga helay Degmada Plymouth.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya inay muhiim u tahay dadka inay helaan talaalka markii mid la diyaariyo tan iyo markii fayrasku is badalayo waqti kadib isla markaana isbadalku mararka qaar noqon karo mid faafa.
Waxaa intaa dheer, waxay muhiim u tahay Iowans inay sii wado dadaallada yareynta si loo yareeyo faafitaanka COVID-19.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan u-qalmitaanka tallaalka iyo si aad u hesho adeeg bixiye, booqo websaytka vaccinate.iowa.gov.